Dowladda oo shaacisay inay gacanta ku dhigeen raggii ka dambeeyay qarixii duuleedka Muqdisho – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Dowladda oo shaacisay inay gacanta ku dhigeen raggii ka dambeeyay qarixii duuleedka Muqdisho
Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday inay gacanta ku dhigeen raggii waday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay oo gelinki dambe shalay ku qarxay deegaanka Siinka Dheer ee ku yaalla duuleedka magaalada Muqdisho.
Saraakiisha ammaanka ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay inay ku guuleysteen in gaariga shalay qarxay ay qabtaan kahor inta uusan qarxin, taas oo keentay inuu yaraado qasaaraha ka dhalan lahaa qaraxaasi.
Ciidamada ammaanka ee NISA ayaa weli wadda howlgalo ballaaran oo ay ku doonayaan inay kaga hortagaan dhibaatooyinka Al-shabaab ay u gaystaan shacabka Soomaaliyeed.
Inkastoo dowladda Soomaaliya aysan ka hadlin tiradda dad ee loo soo qabtay qaraxaasi ayaa hadane waxay sheegeen in gaariga qarxay lagu soo raray dhuxul islamarkaana lagu soo dhex qariyay waxyaabaha qarxa.
Illaa 3 qof oo rayid ah ayaa la xaqiijiyay in qaraxii shalay ay ku geeriyootay, tiro kale oo intaasi ka badane ay dhaawacyo kasoo gaartay, kuwaasi oo haatan dhaawacooda la geeyay xarumaha caafimaad ee ku yaalla magalaada Muqdisho.